Ndị na-emepụta ahịrị na-emepụta akwụkwọ A4 - China A4 Copy Paper Production Line Factory
CHM-SGT usoro synchro-fly sheeter na-anabata imewe dị elu nke ejima helical mma cylinders nke a na-ebugharị ozugbo site na nnukwu ike AC servo moto nwere ezi ziri ezi na ịkpụ dị ọcha.A na-eji CHM-SGT eme ihe maka ịcha osisi, akwụkwọ kraft, AI laminating akwụkwọ, akwụkwọ metalized, akwụkwọ nka, duplex na ndị ọzọ.
KPỤRỤ AHỊRỊ Mpụta SIZE (CHM A4-2 CUT SIZE SHEETER)
EUREKA A4 akpaka mmepụta akara bụ nke A4 oyiri mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akwụkwọ ream nkwakọ igwe, na igbe igbe igwe.Nke na-ewere akwụkwọ ejima rotary kacha emekọrịtara ọnụ ka ọ nwee mbelata arụpụtaghị ihe nke ọma yana mbukota akpaka.
Usoro a na-agụnye ahịrị arụpụtaghị ihe dị elu A4-4 (akpa 4) mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, A4-5 (akpa 5) ịkpụ nha nha.
Na kọmpat A4 mmepụta ahịrị A4-2 (akpa akpa 2) bee nha mpempe akwụkwọ.
A na-eji mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị elu nkenke CHM mee ihe maka ịkpụ akwụkwọ, dị ka akwụkwọ nka, akwụkwọ edemede, akwụkwọ nka, akwụkwọ laser, akwụkwọ foil aluminum na bọọdụ.Igwe CHM na-amịkọrọ euro na teknụzụ Taiwan, were servo moto ịnya ụgbọ ala, na-arụ ọrụ dị mfe site na ihuenyo mmetụ, nke njirimara ndị ahụ na-eme ka igwe anyị dị elu na oke ọsọ wee bụrụ akara ama ama nke ahịa.
KPỤRỤ AHỊRỊ Mpụta SIZE (CHM A4-5 CUT SIZE SHEETER)
EUREKA, nke na-emepụta ihe karịrị 300 igwe kwa afọ, a malitere akwụkwọ n'ịtụgharị ngwá ahịa n'ihi na ihe karịrị 25 afọ, di na nwunye anyị ikike na anyị ahụmahụ na esenidụt ahịa, na-egosipụta na EUREKA A4 ịkpụ size usoro bụ ndị kasị mma na ahịa.Ị nwere nkwado teknụzụ anyị na akwụkwọ ikike otu afọ maka igwe ọ bụla.
KPỤRỤ AHỊRỊ Mpụta SIZE (CHM A4-4 CUT SIZE SHEETER)